Semalt: Amathiphu we-Web Scrape - Ungaphuthelwa!
Uma ungakwazi ukuthola idatha edingekayo kuwebhu, khona ezinye izindlela umuntu angazisebenzisa ukuze athole lezo zindaba ezidingekayo. Isibonelo, umuntu angathola idatha kusuka kuma-AP-based API, akhiphe idatha kusuka kuma-PDF ahlukahlukene noma ngisho nakwebhusayithi ye-scrape screen. Ukukhipha idatha kusuka kuma-PDF kuwumsebenzi onzima njengoba i-PDF ingavame ukuqukethe imininingwane eqondile engayidinga. Ngakolunye uhlangothi, ngesikhathi senqubo yokukrini kwesikrini, okuqukethwe okukhishwe kuhlelwe ikhodi noma ngokusetshenziswa kwe-utility. Ukuthola idatha ye-web scrap kungaba umsebenzi onzima, kodwa uma umuntu enombono wokuthi yini okudingeka yenziwe, kuba lula.
Idatha efundekayo ngomshini
Omunye wemigomo eyinhloko yokweqa iwebhu kuzokwazi ukufinyelela idatha efundwa ngomshini - dns mexico gratis. Le datha idalwe ikhompyutha yokucubungula, futhi ezinye zezibonelo zayo zendlela ifaka phakathi i-XML, CSV, i-Excel amafayela, no-Json. Idatha efundekayo ngomshini ingenye yezindlela ezihlukahlukene umuntu angayisebenzisa ukuze athole idatha yewebhu ye-scrape njengendlela elula futhi ayidingi izinga eliphakeme lezinqubo ukuze alisebenzise.
Amawebhusayithi wokudweba ungenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu zokuthola ulwazi oludingekayo. Kunezinye izimo lapho amawebhusayithi engasebenzi kahle.
Nakuba ukukhwa kwewebhu kuyithandwa kakhulu, kunezici ezihlukahlukene ezenza kube nzima nakakhulu. Ezinye zazo zifaka ikhodi ye-HTML efomethiwe kabi nokuvinjelwa kokuningi. Izithiyo zomthetho zingase zibe yinkinga ekusingatha idatha yewebhu ye-scrape njengoba kunabantu abathile abangazinaki ukusetshenziswa kwamalayisense. Kwamanye amazwe, lokhu kubhekwa njengokusabisa. Amathuluzi angasiza ekusuleni noma ekukhipha ulwazi afaka amasevisi wewebhu nakwezinye izandiso zesiphequluli kuye ngokuthi ithuluzi lesiphequluli lisetshenziswe. Idatha yewebhu ye-scrape ingatholakala ku-Python noma ngisho ne-PHP. Nakuba inqubo idinga amakhono amaningi, kungaba lula uma iwebhusayithi oyisebenzisayo iyona efanele.